သင်္ကြန်တွင်း ခွင့်ပြန် မြန်မာအလုပ်သမားများ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာ၊ မဲဆောက်-ဘန်ကေ - Yangon Media Group
သင်္ကြန်တွင်း ခွင့်ပြန် မြန်မာအလုပ်သမားများ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာ၊ မဲဆောက်-ဘန်ကေ
မြဝတီ၊ ဧပြီ ၂ဝ
ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ သင်္ကြန်တွင်းနေရပ် ပြန်လာကြသည့် မြန်မာအလုပ်သမားများမှာ သင်္ကြန်ကာလပြီးဆုံး သွားပြီဖြစ်သောကြောင်း လုပ်ငန်းခွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် မြဝတီနယ်စပ်ဂိတ်မှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်ရာ မဲ ဆောက်မှ ဘန်ကောက်သို့ပြန်ရန် ကားလက်မှတ်ဝယ်ယူရာတွင် အခက်အခဲဖြစ်နေကြကြောင်း သိရသည်။
”ကျွန်တော်ကဘန်ကောက်မြို့ စပန်ခရွိုင်မြို့နယ်ကစားသောက် ဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ လုပ်အားခအနေနဲ့ကတော့ စားသောက်သူတွေများရင်များသ လို ပိုရပါတယ်။ အခုသင်္ကြန်ပြီးပြီဆိုတော့ ပြန်တော့မယ်ပေါ့။ မြန် မြန်အလုပ်ပြန်ဆင်းတော့ မြန်မြန် ပိုက်ဆံရတာပေါ့။ အခုအပြန်မှာ တော့ ဂိတ်အဝင်အထွက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးအခွန်အခတွေ ဘာမှမပေး ရပါဘူး။ ရွာမှာတော့ မိဘတွေကို တတ်နိုင်သလောက်ကန်တော့ခဲ့ပြီး အလှူလေးတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်” ဟု ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကြာအင်းရွာမှ ကိုမြတ်သူကပြောသည်။ သင်္ကြန်အပြီးတွင် မြဝတီနယ်စပ်ဂိတ်မှ ထိုင်းနိုင်ငံလုပ်ငန်းခွင် သို့ပြန်သူများမှာ တံတားကြီးပေါ် မှလည်းကောင်း၊ အခြားစက်လှေ ဂိတ်များမှလည်းကောင်း ဧပြီ ၁၈ ရက်မှ ဧပြီ ၂ဝ ရက်အထိ ပြန်လည် ထွက်ခွာနေကြရာ လူဦးရေ ၁၅ဝဝဝ ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
”အခုကာလအတောအတွင်း နေရပ်ပြန်မြန်မာအလုပ်သမားတွေ ပြန်လာတာများတာကြောင့် မဲ ဆောက်-ဘန်ကောက်ကားလက် မှတ်တွေဝယ်ယူရာမှာ အခက်အခဲ တွေဖြစ်နေတယ်”ဟု မဲဆောက်အ ခြေစိုက်f(JACBA) မြန်မာပြည်သား အရေးပူးတွဲလှုပ်ရှားမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးမိုးကြိုးကပြောကြားသည်။ မြန်မာလုပ်သားများ မဲဆောက် ဘက်ရောက်ရှိပါက ဘန်ကောက် သို့သွားရောက်ရန် ကားလက်မှတ် ဈေးနှုန်းများမှာ”လို့တူ”(ကားလတ်) တစ်ဦးလျှင် ဘတ် ၇ဝဝ၊ နှစ်ထပ် Express ကားကြီး ဘတ် ၆ဝဝ နှင့် ဘတ် ၇ဝဝ နှစ်မျိုးရောင်းချကြပြီး ပွဲစားများထံမှလည်း ကားလက်မှတ် များဝယ်ယူရရှိနိုင်သည်။
တီးတိန်နှင့် ရိဒ်နယ်စပ်အကြား နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး လမ်းမကြီးကို အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဖောက်လုပ်ပေး?
မူဆယ်မြို့တွင် နှစ်ရက်ဆက်တိုက် ညအချိန် အသံမိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဒေသခံများ စိုးရိမ်စိတ်?
အမေရိကန် အမိမြေလုံခြုံရေး ဒုတိယအကြီးအကဲ ရာထူးမှ နုတ်ထွက်
ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ အလွဲသုံးသူများကို လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ထိရောက်စွာ ထုတ်ဖော် တိုင်ကြားရန်နှ
မက်ဒရစ်ဒါဘီပွဲမှ အောင်ပွဲခံပုံကြောင့် ဂါရတ်ဘေးလ် ၁၂ ပွဲ ပယ်ခံနိုင်
ပူတင်နှင့် မက်ခရွန် ယူကရိန်းကိစ္စတွင် သဘောတူညီသော်လည်း ဆီးရီးယားကိစ္စတွင် သဘောထားမတိုက်ဆိုင်
အစ္စရေးစစ်တပ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဂါဇာနယ်စပ်တွင် ပါလက်စတိုင်း သူနာပြုဆရာမတစ်ဦးသေဆုံး